Discarded Food Waste Slop Recycled Into Cheap Cooking Oil
မြောင်းထဲသို့ သွန်ပစ်လိုက်သည့် အစားအသောက်
တရုတ်နိုင်ငံတွင် စားသောက်ဆိုင်များ၊ အိမ်များမှ ရောင်းမကုန်စားမကုန်၍ မြောင်းအတွင်းစွန့် ပစ်ထား
သည့် စားကြွင်းစားကျန်များမှ ဆီများအားစစ်ယူခပ်ထုတ်ကာဟင်းချက်ဆီအဖြစ်ပြန်လည်ရောင်းချသည့် သ
တင်းတစ်ပုဒ်ကို လွန်ခဲ့ သည့် သီတင်းပတ်က ဒူဘိုင်းထုတ်နေ့ စဉ်သတင်းစာတွင် ဖတ်ရှုမိခဲ့ ရာမှ ကာလအ
တန်ကြာက ဖတ်ရှုခဲ့ ရပြီးဘာသာမပြန်ရသေးသည့် သတင်းတစ်ပုဒ်အား ပြန်ဆိုတင်ပြလိုက်ပါသည်...
နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ထိုသို့ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သည့် ဆီများအားထုတ်လုပ်သည့် သတင်းအား
စုံစမ်းဖော်ထုတ်သည့် သတင်းထောက်အား အဆိုပါ လုပ်ငန်းရှင်ဟုယူဆရသူက ဓါးဖြင့် ထိုးသတ်လိုက်
သည့် အကြောင်းကိုပါ လွန်ခဲ့ သည့် သုံးရက်ခန့် က သတင်းစာတွင်ထပ်မံဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်...
ဒါကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံမှစားသုံးဆီများမြန်မာပြည်ဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်နေသည်ဟုမကြားသိရသော်
လည်း ထိုကဲ့ သို့ မသန့် ရှင်းသောဆီများဖြင့် ကြော်လှော်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့် ကလေးသူငယ်များအ
ကြိုက် အသင့် စားသုံးနိုင်သည့် ဆီကြော်မုန့် များ ( အာလူးကြော်၊ ငါးမုန်ကြော် အစရှိသည်ဖြင့် ) ကတော့ 
ရွှေပြည်ကြီး၏ကျောင်းများ၊ ရပ်ကွက်ဈေးဆိုင်များ၊ ဆူပါမါးကက်၊ မီနီမါးကက် များတွင် ရောင်းချနေသည်က
တော့ အသေအချာမို့ နိုင်ငံ၏အနာဂတ်ရင်သွေးလေးများအတွက် သတိပြုမိစေရန်တင်ပြအပ်ပါတယ်...
အပြင်မှာတော့ ဒီလိုလှလှပပလေးတွေထုတ်ပြီး အထဲကအစားအစာတွေကတော့ 
မသန့် တဲ့ ဆီတွေနဲ့ ကြော်ထားလျှင်...
( ဓါတ်ပုံကိုနမူနာအဖြင့် ပြသရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်...အမှန်တကယ်ထိုတံဆိပ်မဟုတ်ပါ...)
( အကောင်းဆုံးကတော့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စားသောက်ကုန်ကြီးကြပ်စိစစ်ရေးဆိုင်ရာ ခွင့် ပြုချက်မ
ပါသည့် မည်သည့် အသင့် စားသုံးနိုင်သည့် ဆီကြော်မုန့် မျိူးကိုမဆို ရောင်းချခွင့် မပြုသင့် ပါဘူး...)
ဒီ ဒူဘိုင်းနဲ့ ယူအေအီးမှာတော့ မူလတန်းကျောင်းများမှာ ( Junk Food ) လို့ ခေါ်တဲ့ အသင့် စားသုံးနိုင်
သည့် အဟာရမဖြစ်သောမည်သည့် မုန့် ကိုမဆိုရောင်းချခွင့် မပြုပါဘူး...
ဘယ်သူတွေဒုက္ခရောက်ရောက် " ၀ " တို့ ကတော့ မမှုဘူးပဲ...
အကြော်ခံဆီ၊ ဟင်းချက်ဆီ ဆိုသည်ကား စားသောက်ဆိုင်များ၊ အိမ်များမှ ရောင်းမကုန်၊ စားမကုန်၍သွန်
ပစ်လိုက်သည့် အစားအသောက်အကြွင်းအကျန်များတွင်ပါဝင်သည့် ဆီအား စစ်ထုတ်ခပ်ယူထားသည့် ဆီ
တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုလျှင် စားသောက်ဆိုင်များမှ အမှိုက်များစွန့် ပြစ်သည့် မြောင်း၊ ပိုက်များအတွင်းမှ စစ်
ပုံမှန်အားဖြင့် ဆိုလျှင် အဆိုပါစားကြွင်းစားကျန်များအား ၀က်စာအဖြစ်အသုံးပြုကာဝက်များအားကျွေးရန်
ဖြစ်သော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံမှ လူစိတ်မရှိသူ၊ ကိုယ်ကျင့် တရားကင်းမဲ့ သည့် လူ့ တိရိစ္ဆာန်များက အဆိုပါ
စားကြွင်းစားကျန်များမှ ဆီများကိုစစ်ယူခပ်ထုတ်ကာ ဟင်းချက်ဆီအဖြစ်ဈေးနှုံးချိူသာစွာ ပြန်လည်ရောင်း
အလကားရတဲ့ ဆီမို့ ရောင်းတန်းဝင်ဆီသန့် များထက်စာလျှင်တော့ ဈေးအပုံကြီးသက်သာပါတယ်...
ဒီထက်ပိုပြီးစိုးရိမ်ထိတ်လန့် ဖို့ ကောင်းတာကတော့ လမ်းဘေးအကြော်သည်များ၊ ကလေးငယ်များအကြိုက်
အသင့် စားသုံးနိုင်သည့် အာလူးကြော်၊ ငါးမုန့် ကြော်စသည့် တရုတ်ပြည်မှလာသော မုန့် ထုတ်များအနေ
ဖြင့် ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများက ကုန်ကျစားရိတ်သက်သာအောင် အဆိုပါ ဆီညံ့ များအားသုံးစွဲထားနိုင်
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ၀ူဟန်းမြို့ တော်မှ လူယုတ်မာစီးပွားရေးသမားတစ်ဦးကတော့ အကြော်ခံစစ်ထုတ်ဆီဟာ
စားသုံးရန်သင့် တော်ပါတယ် ( ဘေးအန္တရယ်မရှိပါဘူး ) လို့ ပင်အာမခံလိုက်ပါသေးတယ်...
ထိုကိစ္စကိုလွန်ခဲ့ သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းကပင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် တွေ့ ရှိဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်...
ထိုသို့ ဖော်ထုတ်တင်ပြနိုင်ခဲ့ မှုကြောင့် ဝူဟန်းမြို့ တော်အစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများအနေဖြင့် ပြစ်
မှုကျူးလွန်သူများကို တစ်လကျော်ကြာစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ လို့ အညစ်အကြေးဆီ အမြောက်အများအား
တွေ့ ရှိသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ ပါတယ်....
သို့ သော် လူအများစိတ်ဝင်စားမှုလျော့ နည်းသွားချိန်တွင် အဆိုပါအညစ်အကြေးဆီများပြန်လည်ပေါ်
ထွက်လာလိမ့် မည်ဟု အများစုအနေဖြင့် မထင်မှတ်ထားခဲ့ ပေ...
လွန်ခဲ့ သည့် နှစ်စက်တင်ဘာလနှင့် အောက်တိုဘာလများတွင်လျှိူ့ ဝှက်စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုကြောင့် 
ဟုန်ရှန်းဒေသတွင် အဆိုပါ ညစ်ညမ်းဆီ အမြောက်အများအားလျိူ့ ဝှက်စွာရောင်းချနေသည်ကိုတွေ့ ရှိ
စားသုံးတစ်ချိူ့ ကတော့ ထိုဆီကိစ္စဟာအထူးအဆန်းမဟုတ်ပဲအားလုံးသိရှိနေကြတာပဲလို့ ဆိုပါတယ်..
ကဲ ...ပေါက်ဖော်ကြီးတို့ တိုင်းပြည်ကလူစိတ်မရှိတဲ့ သူတစ်ချိူ့ ရဲ့ ဆီလုပ်ငန်းပုံများအားရှုစားကြပါကုန်...
(The bold black-hearted boss even guarantees: “Slop oil is safe to eat”). In March of this year, the internet exposed the Wuhan slop oil public health safety incident (refer to relevant report: “My god! Malicious Wuhan oil factories selling slop oil guarantee safe to eat“).
The problem attracted heated discussion and criticism from netizens around the country. The problem also very quickly attracted the Wuhan city government’s attention and the relevant department committed additional people and man hours, conductingacity-wide special rectification operation that lasted overamonth and investigatedalarge amount of slop oil (refer to relevant report: “Wuhan emergency seige of slop oil scenes (follow-up report)“). Yet, right when the people feel they can relax, who would have thought that illegal refining of slop oil would stageacomeback, and flood Wuhan.
Some people say that this is not surprising, see more, to be expected.
These people should all die. The officials should also all die. Who will truly come supervise/manage this important problem of the people?
What place doesn’t have this kind of business, there are few hotels of medium-price and below that completely purchase cooking oil through proper channels!!!
May the relevant [government] departments use all their might to crack down on this black-hearted [unscrupulous] businessmen. When people have not yet died from eating this, don’t just punish themalittle, because only treating it seriously when after people have died from eating this will be too late. (Recommendation: Make these black-hearted businessmen drink all of this oil themselves.)
Posted by peter kyaw | at 9:22 AM |
Labels: news: bbs.163.com
တရုတ်တွေကို မုန်းနေချိန် တရုတ်မကောင်းကြောင်း ပြောတယ်လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့.. ဒီမြောင်းဆီ စစ်ထုတ်ပြန်ရောင်းတဲ့ကိစ္စကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က သတင်းမှာ ဖတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်.. တရုတ်ပြည်က တရုတ်တွေဟာ ကိုယ်ကျိုးသမားတွေများပါတယ်.. ထိုဟူးအတု၊ ရေညှိအတု၊ ကျွန်မတို့မသိနိုင်တဲ့ အတုတွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်.. တရုတ်ကထုတ်တဲ့အစားအစာတွေကို သိပ်မစားတာ အကောင်းဆုံးပါ... အာဟာရထက် လူကိုဒုက္ခပေးဖို့က ခပ်များများပါ..
မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ကို ပက်ပက်စက်စက်လုပ်တာဘဲဗျာ။ ဘာမှကို မစားရဲ့အောင်ဖြစ်နေပါလား။
ကျတော့် ဖေ့ဘွတ်မှာ ပို့ စ်ဖို့ ကူးယူသွားပါတယ်အကို
ဒီလို ညစ်ပတ်လွန်းတဲ့ အလုပ်တွေမှာတော့ တရုတ်က
တကယ်ပြိုင်စံရှားပါပဲ။ သာမန်လူတွေ မစဉ်းစားမိတာတွေ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအလုပ်ကတော့ တော်ရုံစိတ်ဓါတ်အောက်
Donkey to run for mayor
China's most literary prostitute arrested
Pianist bends arms backwards
How about sex for lunch?
Man climbs 15 stairs on his headလှေကားထစ်များကိုဥ...
Turkish morgue ready for the resurrection of the d...
'It's great to be small': 2ft tall cheerleader (wh...
Coloured chicks are the new black
Jesus statue vandalised with red paint draws stamp...
Typo in romantic novel causes bowel movement durin...
Saudi restaurant fines diners for leftovers
South African man in court for raping his goat
Selyna Bogino does things with5balls
77-year-old woman kneels naked outside courthouse ...
နာယူမှတ်သား ၀န်မင်းစကား... ရွှေပြည်ကြီးမှ ၂၁ ရာစု...
'Lapdancers dressed as nuns put onasexy strip fo...
Blogger ဆိုတာ ဘာလဲ ကျွန်တော်ဘလော့ ဂ်စတင်ဖွင့် လှစ...
Crash survivor killed on walk of thanks ယာဉ်တိုက်...
Snapped up: Villagers capture world's largest croc...
Free entry offered to virgins at Chinese parkအပျိူ...
Pubic hair collection seized from Govt official
Will You Date For A SupersizedBombshell ?
Breathtaking Angel Falls